Sirdoonka Sucuudiga Oo Qirtay Dilka Wariye Jamaal Khaashogi Iyo Dareenka Dunidu Ka Bixisay | Baligubadlemedia.com
Sirdoonka Sucuudiga Oo Qirtay Dilka Wariye Jamaal Khaashogi Iyo Dareenka Dunidu Ka Bixisay
Dawlada sucuudiga ayaa kooxdii fulisay dilka wariye Jamala Khaashogi ku tilmaantay qaar fuliyey “hawlgal qaldan oo aanay amar u haysan” , hadalkaas oo ah mid dhan kale ka eegaya dhacdo dunida oo dhami ka qaylisay.
Wasiirka arimaha dibada sucuudiga Caadil Al-Jubayr, ayaa u sheegay telefishanka Fox News in “dilku” ahaa “khalad weyn” waxaanu beeniyey in dhaxal sugaha taajka boqortooyada ee awoodda badani amray dilka wariyahaasi.
Wariye Khaashoqji waxa markii ugu dambaysay isagoo nool la arkay markii uu galayey qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Xukuumadda Sucuudigu waxay markii hore sheegtay in uu qunsuliyada ka baxay 2
Oktoobar, laakiin Jimcihii ayay markii ugu horaysay qirtay in uu dhintay, waxaanay sheegtay inuu ku dhintay dagaal gacan ka hadal ah [oo isaga iyo saraakiil wax weydiinaysay dhex maray]. Hase yeeshee arintaa waxay kala kulantay dhaleecayn weyn.
Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in Khaashoqji oo ahaa nin ku cadcad dhaliisha xukuumadda Sucuudiga ay koox ka tirsan sirdoonka Sucuudigu ku dhex dishay dhismaha qunsuliyadda waxaanay sheegeen in ay hayaan caddaymo arintaa muujinaya.
Dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Sacuudi Carabiya ugu baaqay inuu sharraxaad degdeg ah ka bixiyo geerida Jamaal Khaashoqji.
War murtiyeed ay si wada jir ah u soo wada saareen sadexdaas dal ayaa waxay ku sheegeen arrinta ah inuu Khashoggi uu ku dhintay “dagaal ka dhacay” qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul ay u baahan tahay in laga keeno “caddeeymo macquul ah oo la rumeysan karo”.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu wacad ku maray inuu mudda gaaban uu ku soo bandhigayo caddeymaha dhabta ee dilka wariyahaasi la xidhiidha.
Madaxweyne Erdogan wuxuu intaa ku daray inuu faafaahinta ku saabsan dilka Khashoggi uu salaasada baarlamaanka la hor iman doono.
Dibadbax lagu qabtay Istanbul mar uu ka hadlayna wuxuu sheegay “waxaan raadineynaa ee iisu keen a keenay waa caddaalad taa ayaana keeneysa inaan runta la qariyey oo dhan aan dibadda soo dhigno.”